Qaramada Midoobey oo ku dhawaaqday in qaar kamid ah gobollada Somalia ay ka jirto macaluul. – Radio Daljir
Qaramada Midoobey oo ku dhawaaqday in qaar kamid ah gobollada Somalia ay ka jirto macaluul.
Somalia, July 20 -Iyadoo gobolka Geeska Africa lagu tilmaamay meel ay ka jirto masiibo dhanka bini?aadantinimada ah islamarkaana u baahan gargaar deg deg ah ayaa waxaa issi soo taraya walaaca beesha caalamku ka muujineyso in xaaladdu ay si deg deg ah usii xumaato.
Qaramada Midoobey ayaa hadda ku dhawaaqaysa in qaybo kamid ah gobollada koonfureed ee Somalia ay ka jirto Macaluul ba?an, waxana UN-ku sheegay in ay ugu baaqayaan waddamada deeqda bixiya in ay gargaar deg deg ah la gaaraan gobollada ay ka jiraan masiibooyinka bani?aadantinimada ah ee Somalia.
Isku-dubaridaha gargaarka Somalia ee QM mr. Mark Bowden ayaa sheegay in ku dhawaaqista laga jeedinayo magaalada Nairobi maanta oo Arbaco ah, waxaana ku dhawaaqistaan ku salaysan tahay xog laga helay nafaqa-darrida iyo amniga cuntada ee Somalia .
Qof shaqaale ah oo jooga magaalada Geneva ayaa laga soo xigtay isagoo leh, in qaar kamid ah gobollada koonfureed e Somalia lagaga dhawaaqayo macaluul baahsan.
Beesha caalamka ayaa horay ugu dhawaaqday in Somalia ay ka jirto xaalad deg-deg ah waxaana ay xaaladdaasi hal derejo uun ka hooseysaa tan macaluusha.
Abaartii ugu xumayd muddo 60 sano ah ayaa la sheegay in ay ku dhufatay geyiga Geeska Africa, iyadoo dad ku dhow 3 million oo Somali ah ay si toos ah u saamaysay abaartaasi, waxaana war-bixinno la helay muujinayaan carruur la il-daran nafaqo-darro xadkeedu sarreeyo.
Macaluusha ayaa lagu micneeyaa marka 10,000( tabankii kun ) ee qof ay laba qof u dhimato gaajo maalinkasta iyo marka jirka carruurtu dhismayo illaa 30%.
Hay?adda gargaarka Qaramada Midoobey u qaabilsan ee UNHCR ayaa shalayto Salaasadii dalbatay in ay u baahantahay damaanad dhanka ammaanka shaqaalaheeda si ay uga hawl-gasho meelaha ay maamulaan kooxda Al-shabaab.
Ururka Al-shabaab oo doonaya in uu afgenbiyo dawladda Somalia ayaa gacanta ku haya inta badan gobollada Koonfureed ee Somalia iyo qaybo kamid ah magaalada caasimada ah ee Muqdisjho.
Dadka wax taxliiliya ayaa sheegaya in ogolaanshaha ururka Al-shabaab uu ogolaaday gargaarka la geynayo Somalia, ay ka turjumeyso cabsi uu ka qabo in ay ku kacaan dadka somaliyeed ee baahan iyo in uu ururkaasi doonayo in ay leexsadaan qaar kamid ah gargaarka islamarkaana ay lacag ku canshuuraan gargaarka si ay u helaan lacag ay dagaalka kusii wadaan u helaan, ayey tiri war-bixintu.
Kaaliyaha xoghayaha amuuraha dibadda ugu qaabilsan Africa Johnnie Carson, ayaa sheegay in dawladdiisu ay qiimeyneyso Al-shabaab inta aanay bixin wax gargaar ah.
Laba asbuuc ka hor ayaa hay?adaha gargaarka ee caalamiga ah la yaabeen balan-qaadka Al-shabaab iyadoo aan la garanayn agendaha u qarsoon.
Nus malyyuun carruur ah oo ku sugan Geeska Africa ayaa qarka u saaran in ay geeriyoodaan haddii aan gargaar degdeg ah la helin xag rabbi iyo xag kaleba.